Faankishinii Guyyaa fi yeroo
Guyyaa fi yeroo Functions
Himootaa fi faankishinoota asitti ibsaman guyyaa fi yeroo herreeguuf fayyadami.
LibreOffice Bu'uurri garagarummaa yeroo ykn guyyaa gara yeroo fi guyyaa ittifufaa gatii numeerikaalaati geedara. Erga garaagarumman shallagamee booda faankishinoonni adda ta'an gatii yeroo waaltinaatti ykn guyyaa akkataa qophii ti irra deebi'ee geedara.
Gatii guyyaa fi yeroo gara lakkoofsa qeenxee bololi'aa kurniitee walitti makuun ni dandeessa.Guyyaan gara itergaatti fi yeroon immo gara gatii kurniiteetti jijjiirame. LibreOffice Kanamalees, bu'uurrii yeroo ibsame guyyaaa fi yeroo of keessaa qabu qosa guyyaa gegeedarama ni deegara.
Gatiiwwan guyyaa jijjiiruu
Faankishiniin armaan gadii gatii guyyaa gara lakkoofsa shallagamuu danda'uuti jijjiiree gara duubati deebi'a.
Sirna Guyyaa fi Yeroo
Himoonni fi faankishiniin armaan gadii sirna guyyaa deebisu ykn olkaa'u.
Title is: Faankishinii Guyyaa fi yeroo